My freedom: Rolling to 2017 + Lab Report
Rolling to 2017 + Lab Report
New Year Eve မှာ အမေတို့က ထုံးစံအတိုင်း ရန်ကုန်အိမ်မှာ မိသားစု စုံစုံညီညီနဲ့ အကင်လုပ်စားကြတယ်။ ကန်ဒီကလည်း ဒီမှာအားကျမခံ Sushi လုပ်စားတယ်။ ဆူရှီအတွက် ကန်ဒီထည့်တဲ့ Ingredients တွေက ဆလတ်ရွတ်၊ မုန်လာဥ၊ သခွားသီး၊ ပြောင်းဖူး၊ မှိုနဲ့ ထောပတ်သီး။ မှိုကို ရေခမ်းသွားအောင် မီးဖိုပေါ်မှာ အရင်အပူပေးထားတယ်။ သူများတွေက ထောပတ်သီးကို အချောင်းလိုက်လေးတွေ ထည့်ပေမယ့် ကန်ဒီက ချေပြီးဆားလေးနဲ့နယ်ထားပြီးမှ ထည့်ရတာကို ပိုကြိုက်တယ်။
လာမယ့် (၁၅)ရက်နေ့ အိမ်မှာဘုရားအနေဂဇာတင်နဲ့ နှစ်ဦးဆွမ်းကပ်ဖို့ စီစဉ်ထားတယ်။ ဟိုးအရင် လွန်ခဲ့တဲ့(၄)နှစ်လောက် အိမ်မှာအရင်ကနေတဲ့ အန်တီရှိတုန်းကပဲ အိမ်မှာ ဆွမ်းကပ်ဖြစ်တယ်။ အန်တီပြန်သွားပြီး အိမ်မှာလူငယ်တွေချည်း ဖြစ်သွားတော့ ဆွမ်းမကပ်ဖြစ်တော့ဘူး။ ရန်ကုန်ပြန်တုန်းက ကန်ဒီပင့်လာတဲ့ ဘုရားသေးသေးလေးကလည်း ဒီမှာအနေဂဇာမတင်ရသေးဘူးဆိုတော့ ကွက်တိပဲပေါ့။ အမေနဲ့အဖေကလည်း (၆)ရက်နေ့ဆို စင်္ကာပူရောက်ပြီ။ တိုပါးရိုးကျောင်းမှာပဲ လျှောက်ထားတယ်။ ဘုန်းဘုန်းက ရတယ်တဲ့။ အိမ်ပင့်တာက သိပ်လူမများဘူးတဲ့။ ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးပေါ့နော်... အာရုံဆွမ်းပဲ ရွေးလိုက်တယ်။ အိမ်ကအစ်မတွေကတော့ လူသိပ်မပင်ပန်းအောင် အော်ဒါမှာချင်တယ်။ ကန်ဒီကတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ လုပ်ချင်တယ်။ ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးကပ်တော့ ကုသိုလ်ပိုရတယ်လေ။
အာရုံဆွမ်းဆိုတော့ သိပ်ပြီးလည်း အမယ်မများပါဘူး။ သက်သတ်လွတ်ပဲ ကျွေးမှာပါ။ ဘုန်းဘုန်းတို့ကိုလည်း ကြိုလျှောက်ထားတယ်။ သက်သတ်လွတ်မုန့်ဟင်းခါး ကျွေးမယ်။ အမေ့ကို ကန်ဒီစားနေကြ စံပြဒေါ်ကြည် သက်သတ်လွတ် မုန့်ဟင်းခါးထုတ်လေးတွေ ၀ယ်လာပေးဖို့ ပြောထားတယ်။ အဲ့ဒါကို အစာပလာ... ပဲ၊ ငှက်ပျောအူ၊ ကြက်သွန်နီလေးတွေ ထည့်လိုက်ရင် ရှယ်ဖြစ်သွားပြီ။ ဧည့်သည်တွေလည်း အများကြီး မဖိတ်ဘူး။ ကိုယ့်မိသားစုပဲ။ အချိုပွဲအတွက် Vegan Banana Cake လေး ကိုယ်တိုင်ဖုတ်မလို့လေ.. အခုအစမ်းထပ်လေ့ကျင့်နေတယ်။ မုန့်ဖုတ်ထားရင်း စာရေးနေတာ... ဟော ရပြီ... ဒန်တန်တန်
ရှယ်ပဲ... အရင်တခေါက်ထက် အများကြီးကောင်းတယ်။ ဒီတခေါက် Whole Grain Flour တ၀က်၊ Bread Flour တ၀က် သုံးထားတယ်။ Baking Soda ပိုထည့်ထားတယ်။ သကြားလျော့တယ်။ ငှက်ပျောသီး သုံးလုံးသုံးထားတယ်။ ဒီတခေါက်မှ ငှက်ပျောသီးနံ့လေး မွှေးပြီး တကယ်ကောင်းတာ။ ဒါဆိုအချိုပွဲအတွက် ပူစရာမလိုတော့ဘူး... ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ ငှက်ပျောသီးကိတ်လေးရယ်၊ ကော်ဖီရယ်၊ သစ်သီးရယ်... ပြည့်စုံသွားပြီ။
ဒါနဲ့ ကန်ဒီရန်ကုန်ပြန်တုန်းက သွေးစစ်ထားတဲ့ Result လေး မပြရသေးဘူးနော်... အားလုံးပုံမှန်ပဲ။ သွေးအားလည်းမနည်းဘူး။ သံဓာတ်အပြည့်အ၀ရှိတယ်။ Folic Acid လည်း မနည်းဘူး။ Vitamin B12 လေး တစ်ခုပဲ မဆိုသလောက်လေး နည်းတာ... ဒါကလည်း ကိုယ်မျှော်လင့်ပြီးသားဆိုတော့ ပြသနာမရှိပါဘူး။ B12 ဆိုတာ မြေကြီးမှာရှိတဲ့ Bacteria လေးတွေက ထုတ်လုပ်တာလေ... သားသတ်လွတ်စားတဲ့လူမှမဟုတ်ဘူး အသားစားတဲ့လူလည်း Vit B12 နည်းနိုင်ခြေရှိတာပဲ။ Deficient ဖြစ်တယ်လို့ ပြောရလောက်အောင်လည်း နည်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ စိတ်ပူစရာမရှိဘူး။ Vit B12 supplement ကတော့ သတိရရင် ရသလို သောက်ဖြစ်ပါတယ် ဟီးဟီး xD (ဆေးကြောက်တဲ့လူဆိုတော့ သတိမရတာ များပါတယ် xD)
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ ဟိုနေ့ကအလုပ်မှာ လူနာတစ်ယောက် သွေးအားနည်းလို့တဲ့ ဆရာဝန်က သံဓာတ်အားဖြည့်ဆေး Iron Tablet ပေးလိုက်တယ်။ လူနာကလည်း ဆေးမသောက်ချင်တော့ ကန်ဒီ့ကိုမေးတယ်။ သံဓာတ်များများရအောင် ဘာစားရမလဲတဲ့။ ဆရာဝန်ကတော့ သူ့ကိုအသားများများစားလို့ ပြောတယ်တဲ့။ ကန်ဒီက "Ok.. If you ask me, since I am vegetarian, I would not recommend eating meat for iron. You can also get iron from all the dark green vegetables". လူနာက "Although you are vegetarian, you didn't have iron deficient but why that happened to me?!?!"
ဒီနေရာမှာ ကန်ဒီ ပြောပြချင်တာက မွေးကတည်းက တယူသန်စွဲနေတဲ့ တချို့အရာတွေကို လက်တွေ့အချက်အလက်တွေပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲလက်ခံသင့်ရင် ပြောင်းလဲလက်ခံကြရမယ်။ ဥပမာ.. နွားနို့သောက်မှ Calcium ရမယ်.. အရိုးသန်မာမယ် ဆိုတာမျိုး၊ အသားစားမှ သံဓာတ်ရမယ်.. သွေးအားကောင်းမယ်၊ Protein ရမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။ ပဲနို့မှာလည်း Calcium နဲ့ Protein ရှိပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းတွေ့ရှိချက်တွေအရဆို နွားနို့အရမ်းသောက်တဲ့ အနောက်တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာ အရိုးပွရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်း ပိုများတာတွေ့ရပါတယ်တဲ့။ အဲ့လိုပေါ့... မျက်စိကြီးစုံမှိတ်ပြီး ထိုင်ငြင်းမနေဘဲ စာများများဖတ်ပါ... ပြောင်းလဲလက်ခံသင့်တာတွေကို ပြောင်းလဲလက်ခံပါ။ ကန်ဒီသိချင်တာတွေရှိရင် Dr. McDougall's website မှာ သွားသွားဖတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဗဟုသုတ အများကြီးရပါတယ်။
အသိမိတ်ဆွေတော်တော်များများက ကန်ဒီ့ကိုဆိုစိတ်ပူကြတယ်။ အသားမစားဘူး... သွေးအားတွေ နည်းတော့မှာပဲ... ကျန်းမာရေးတွေ ထိခိုက်တော့မှာပဲ ဆိုပြီး။ ဒါကလည်း ချစ်လို့ စိတ်ပူကြတာဆိုတော့ ကန်ဒီက ပိုတောင်ပျော်ပါတယ်။ ရန်ကုန်ပြန်တုန်း သွေးစစ်တယ်ဆိုတာကလည်း စိတ်ပူနေတဲ့လူတွေ စိတ်မပူစေဖို့နဲ့ လိုအပ်တာတွေရှိရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ပါ။
Posted by Candy at 8:34 PM
Labels: My Diary, Vegan, Yummy
ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီး ညီမလေးကန်ဒီအတွက် အစ်မ သက်သတ်လွတ်မုန့်တွေထပ်ရှာဖတ်ပြီး လုပ်ကြည့်ဦးမယ် အောင်မြင်ရင် recipe လာပေးမယ်နော်..။ နောက်ပြီး ပဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မုန့်တွေ ဟင်းတွေလည်းသိရင်ပို့စ်တင်ပေးဦးမယ်...း)
ပြောဖို့ကျန်ခဲ့တယ် ဘုန်းကြီးဆွမ်းကပ်တဲ့နေ့ကျရင် မုန့်ကိုလှလှပပအတုံးလေးဖြစ်အောင် ဖွာထွက်မနေအောင် အသွားပါတဲ့ဓါးလေးနဲ့ လွှတိုက်သလိုတိုက်ပြီး လှီးပေးနော်...း)
January 3, 2017 at 11:47 AM
ဟုတ်ကဲ့... မလှီးတတ်တော့ အဲ့လိုပုံစံဖြစ်နေတယ် မုန့်က ဟီးဟီး xD xD
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်မမိုးငွေ့ :D
Vegan: ယနေ့ စားဖွယ် #2
Bali: Kuta Beach and Uluwatu Temple
Healthy and Beauty.....
ဖာဘယ်ဂျေး ရဲ့ ကမ္ဘာကျော် ရတနာစီခြယ် အီစတာဥ များ -၁-2-3